2019 October Archive | Dhamma Training Center
တနင်္ဂနွေ နေ့ ပဋ္ဌာန်းသင်တန်း
www.facebook.com/dhammaschool.ykt တွင်လည်း ၀င်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ [caption id="attachment_11679" align="aligncenter" width="900"] Dhamma Training Center[/caption]...
အဓိပတိပစ္စယော ( Adhipati paccayo ) ပါဠိတော်
အဓိပတိပစ္စယော ( ပါဠိတော် ) zawgyi
၄၁၃။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ အာရမ္မဏာဓိပတိ၊ သဟဇာတာဓိပတိ။ အာရမ္မဏာဓိပတိ -- ဒါနံ ဒတွာ သီလံ သမာဒိယိတွာ ဥပေါသထကမ္မံ ကတွာ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ၊ ပုဗ္ဗေ သုစိဏ္ဏာနိ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ၊ ဈာနာ ဝုဋ္ဌဟိတွာ ဈာနံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ။ သေက္ခာ ဂေါတြဘုံ ဂရုံ ကတွာ...
3. Adhipati Paccaya, General
Kusalo dhammo kusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. Ārammaṇādhipati – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā, taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati....
ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား ၄၁၃။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁) ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား အဓိပတိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ အာရမ္မဏာဓိပတိ၊ သဟဇာတာဓိပတိ ၁။ အဓိပတိပစ္စည်းသည် အာရုံအားဖြင့်လွန်ကဲသော အစိုးရခြင်းဟူသော အာရမ္မဏာဓိပတိနှင့် ၂။ အတူတကွ ဖြစ်၍ လွန်ကဲသောအစိုးရခြင်းဟူသော သဟဇာတာဓိပတိဟူ၍...